‘सन्त्रस्त आँखाहरु’ माथि समालोचनात्मक दृष्टि – मझेरी डट कम
‘सन्त्रस्त आँखाहरु’ माथि समालोचनात्मक दृष्टि
सन्त्रस्त आँखाहरूलाई ‘जनमत प्रकाशन’ ले २०६१ सालमा बजारमा ल्याएको हो । उक्त कथाकृतिमा चर्चित सर्जक इस्माली र विजय चालिसेले भूमिका लेखिदिएका छन् । यस कृतिमा एक दर्जन विभिन्न शीर्षकका कथाहरू रहेका छन् । तीमध्ये कतिपय कथाहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेका देखिन्छन् ।
छोरो नजन्मिएको, छोरीलाई सन्तान नमान्ने सामन्ती संस्कारले युक्त गरिब परिवारकी काँइली छोरी मालतीको विहे १५ बर्षकै उमेरमा भएको थियो । यता घरमा पनि स्थिति त्यही थियो । जसरी पनि मालतीले छोरो पाइदिनुपर्ने, नभए सौताको सामना गर्नुपर्ने । उसले त्यस्तो सामाजिक प्रचलनबाट छुटकाराको यात्रा तय गर्छे । ऊ ‘म’ पात्रसँग घोषणा गर्छे – म एउटा यात्रामा निस्केकी छु, विवेक विरुद्धको यात्रामा । उसलाई लोग्नेको घर छोडेकोमा प्रायश्चित छैन, बरू हौसिन्छे र भन्छे -म अहिले धेरै खुसी छु ।
सङ्ग्रहको अर्को कथा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि राणाको सक्रिय नेतृत्वमा सत्ताको हालीमुहाली गरेर कुस्त कुम्ल्याएको, देशमा बहुदल बहालीपछि छटपटाहटको तातो तेलमा जिउँदो माछो उफ्रेझैं भएको पूर्वपञ्चहरूको मानसिकताको प्रनिनिधि दृश्यको शब्दचित्र हो । कथाको पूर्वपञ्चको प्रतिनिधि पात्र हो -हीराप्रसाद ।
चुनावको मौसम अर्को महìवपूर्ण कथा हो । शनकराम, दिपिया, सन्तोष, फूलो ‘म’ आदि यस कथाका पात्रहरू हुन् । शनकराम यादव २०४८ सालको निर्वाचन जितेपछि मन्त्री हुन्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकी विधवा एक बालककी आमा दिपियालाई बम्बैमा पुर्‍याएर बेच्दछ । छोरो सन्तोष विचल्लीमा परेर हुर्कन्छ । उसलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागृत हुन्छ र भन्छ -संसदीय ब्यवस्थाको जालमा नफसौँ ।’
उक्त युवक कालो वर्णको छ । प्रहरीहरू त्यस युवकलाई रुकुम रोल्पातिरको माओवादी कार्यकर्ता ठान्छन् र गिरफ्तारीका लागि प्रहरीका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिन्छ । प्रहरी खोरमा सारा काला वर्णका युवाहरूलाई ल्याएर थुनिन्छ । असम्बद्ध युवाहरूलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ । प्रस्तुत कथाले ‘दसजना दोषी फुत्कियोस तर एक जना पनि निरपराध व्यक्तिले सजाय नपाओस्’ भन्ने उक्तिको बेइज्जत गरेको छ । प्रस्तुत कथाले प्रहरीहरूको कार्यदक्षताहीन हर्कतबाट जनताका निर्दोष छोराछोरीहरूले खेप्नुपरेको सास्तीको वास्तविक चित्र उतारेको छ ।
रमिला र शान्तासँगै हुर्केका बालसखा हुन् । उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि यी दुबै जना काठमाडौं आएका थिए । दुबैको विवाह सरकारी अधिकृतसँग हुन्छ । रमिला सङ्घर्षशील नारी भएकीले उसको जीवनदृष्टि समाजमुखी छ, सचेत छ, कर्तव्यनिष्ठ र नैतिक चेतनायुक्त छ तर शान्ताको चिन्तन जसरी पनि कमाऊ, मोजमस्ती गर, देश, समाज, सङ्घर्षजस्ता पक्षहरू अनावश्यक हुन् भन्ने सङ्कीर्ण व्यक्तिमुखी रहेको छ । यही चिन्तनका दुई विपरीत ध्रुवमा उत्रिएका पात्रहरूबीचको घनिष्टता क्रमशः पातलिन्छ । शान्ताका श्रीमान् भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउँछन् । शान्ताहरूले बत्तीसपुतलीमा एउटा सुन्दर र भव्य घर खरिद गरे । उता रमिलाको जीवन सामान्य ढङ्गमा चलिरहेको हुन्छ । ऊ सन्तुष्ट छे । अनैतिक ढङ्गले भए पनि सम्पन्न जीवन विताउनु पर्छ भन्ने शान्ता रमिलाले वृद्धाश्रम खोल्ने प्रस्ताव राख्दा यस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछे – आ ! तँ पनि यी नचाहिँदा कामतिर लागिछस् । बसेर खान छोडेर यी चिन्नु न जान्नुका बूढाबूढीलाई स्याहारेर के काम ? म त खुट्टा पसारेर खान्छु ।
प्रतीक र बिम्बको प्रयोग साहित्यमा ‘मानिसको तस्बिर’ भन्ने अर्थमा प्रयुक्त गरिन्छ । प्रस्तुत कथा सङ्ग्रहका कथाहरूभित्र प्रकृतिको चित्रणद्वारा पात्रहरूको सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिको ‘मानसिक तस्बिर’ खिचिएको पाइन्छ । जस्तो ‘डिलमा गोदावरी र मखमली फूलका बोटहरूले कोपिला हालिरहेका थिए । एक मनले सोची फूलका बोटहरू भाँचिए पनि भाँचिऊन्, भारी डिलतिर बिसाउँदा सजिलो हुन्छ । फेरि अर्को मनले सोची त्यतिका मिहिनेत गरेर हुर्काएका फूलहरू कसरी बिगार्ने ? (एउटा नयाँ यात्रा पृ. ११) “उपर्युक्त कथनलाई अविधार्थमा हेर्दा कथाकी पात्रा मालती भारी बिसाउने सजिलो ठाउँ खोजिरहेकी छे तर यहाँ लेखकले ‘कोपिला’ को प्रयोग मालतीको पेटभित्र हुर्किरहेको शिशुको सङ्केतको रूपमा गरेका छन् भने मालतीको पारिवारिक परिस्थितिको बीच गर्भवतीको प्रतीक कोपिला र फूलको बोटको प्रतीक मालती स्वयं हो । उसको अन्तर्चेतनाको पीडालाई फूलको बोट भाँचू कि नभाचूँ भन्ने द्वन्द्वको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
यस किसिमको वस्तुको सुन्दर चित्रण अन्य कथाहरूमा पनि पाइन्छ । जस्तो ः – ‘जेठको खडेरी अचेल गाउँमा आतङ्कको रूपमा भित्रिएको छ । (पश्चिमतिर पृ. २१.)’
लेखकले उपर्युक्त वाक्यमा प्रयोग गरेका ‘खडेरी’ शब्द आतङ्कको रूपमा प्रयुक्त भएको छ । विम्बले गाउँका सर्वसाधारण जनताबीच आतङ्क सिर्जना गर्न भित्रिरहेका सत्ताका स्थानीय चाटुकार र प्रहरी प्रशासनको जनविरोधी हर्कततर्फ सङ्केत गरेको छ । यसरी कथाकार पोखरेल प्रगतिवादी कथा साहित्यमा आफ्नो अलग पहिचानगत विशेषताहरूसहित स्थापित युवा स्रष्टा हुन् भन्न सकिन्छ ।
कथाकारको आत्मस्वीकृति पनि छ कल्पनाको आधार जीवनको वास्तविकताभन्दा टाढा नहोस् ….मेरो उद्देश्य सत्य हो र म त्यसलाई आदर गर्दछु । कथाकार पोखरेलले व्यक्ति र समाजको बीचमा रहने सम्बन्ध र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधको तस्बिरलाई यथार्थको धरातलबाट सफलतापूर्वक खिचेका छन् । कथामा नवीन चेतना र पुराना संस्कारका बीच चलिरहेको अन्तर्विरोधलाई केलाउने आफ्नै शैली बनाइएको छ । पोखरेल वर्तमानका प्रशवमय पीडाहरूको बीच भविष्यप्रति आशावादी छन् । वर्तमानमा बसिखाने वर्गले खडा गरेको प्रतिकुल परिस्थिति गरिखाने वर्गका मानिसहरूको संज्ञानात्मक सङ्गठित विद्रोहहरूद्वारा पूर्णतः पराजित हुनेछ र अन्ततः श्रमजीवीको अन्तिम विजय सुनिश्चित छ भन्ने विश्व दृष्टिकोणले कथा ओतप्रोत छन् । यही नै कथाकार मातृका पोखरेलको प्राप्ति हो । नेपाली प्रगतिवादी कथा साहित्यको महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा सन्त्रस्त आँखाहरू अमर कृति बनेको छ ।
कथाहरूको आन्तरिक बुनोट र बाह्य बनोटमा शिल्पगत परिष्कार गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । प्रगतिवादी साहित्यमा कलापक्षलाई विचार पक्षले ढाक्छ भन्ने प्रतिकित्ताका समालोचकहरूले प्रस्तुत सङ्ग्रहमा नाक खुम्च्याउन सक्छन् तर “कला कलाका लागि” नभएर “कला जीवनका लागि” भन्ने दृष्टिकोणले सन्त्रस्त आँखाहरू एक उत्कृष्ट कृति हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन । वर्णविन्यास, वाक्य सङ्गठन तथा उखानमूलक सुक्तिहरूको गलत प्रयोगले भ्रम सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिन्न । यहाँ एउटा सन्दर्भ उदाहरणको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ । ‘झण्डै ज्यान नगएको (सन्त्रस्त आँखाहरूमा रनेम्पाको भनाइ पृ.३३, तेस्रो अनुच्छेद) । उक्त भनाइमा पात्र वा लेखकले भन्न चाहेको ‘झण्डै ज्यान गएको’ अर्थात् बाँचियो हो तर प्रयुक्त वाक्यले ‘ज्यान गएको’ अर्थात् मरियो भन्ने अर्थ दिएको छ । यस्ता अत्यन्त सामान्य पक्षमा पनि यथोचित ध्यान गएको देखिँदैन । त्यस्तै पश्चिमतिर कथामा एउटै पात्रको थर फरकफरक भएको छ, कहीँ ‘गुमाने जैसी’ र कहीँ चाहिँ ‘गुमाने संन्यासी’ भनिएको छ । यसबाट पाठकहरू अलमलमा पर्न सक्छन् । यी र यस्ता कसरमसरहरू कथामा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
प्रस्तुत सङ्ग्रहका कथाहरूमा समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोध, गलत चिन्तन एवम् रूढिग्रस्त मानसिकताका जटिलताहरूलाई सरल, सुवोध भाषामा उतारिएको छ । छोटो बसाइमै पढी सिध्याउन सकिने मातृकाका कथा समाजको अग्रगामी चेतनातर्फ स्पष्ट दिशाबोध गर्न सफल छन् । यसरी नेपाली प्रगतिवादी साहित्यको एक महìवपूर्ण प्राप्ति हो – सन्त्रस्त आँखाहरू ।